Realme 8: standardkpụrụ ọhụrụ nke bara uru maka ego | Gam akporosis
Firmlọ ọrụ Asia Realme na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ịnye ngwaahịa nwere ezigbo uru maka ego, na-abịakwute usoro Xiaomi maka ihe ịga nke ọma, ọbụlagodi n'ọnọdụ ụfọdụ karịrị atụmatụ ya dabere na nso na ngwaahịa a kapịrị ọnụ, agbanyeghị, Realme ọ na-elekwasị anya nke ọma na ekwentị mkpanaaka dị ka isi na-adọrọ mmasị.
Anyị nwere Realme 8 ọhụrụ n'aka anyị ma anyị nyochaa ya nke ọma iji gwa gị ihe ọrụ njirimara anyị zuru ezu dị. Choputa n’ime anyi udiri igwe ohuru ohuru nke n’abia n’agha n’ahia ahia karia ndi ozo.
3 Nnwere onwe na Realme UI 2.0
4 Multimedia ahụmahụ na igwefoto ule
Realme amatala mgbe niile, ọ dịkarịa ala ruo ugbu a, ịkụ nzọ na atụmatụ "abụghị ihe ha yiri", yabụ ikwu okwu. N'agbanyeghị eziokwu na ha na-emepụta ọkọlọtọ na-adabere na plastic, eziokwu bụ na ị ga-enwe ha n'aka ịghọta ya. Otu ihe a emeela ugbu a na Realme 8, ọnụ na-akpọ gị ka ị chee echiche banyere ụlọ dị elu mana nke na-akwado plastic. Nke a bụ otu ha si chọta ezigbo nkwụsi ike n’etiti oke ibu na oke.
Akụkụ: X x 160,6 73,9 7,99 mm
Ibu ibu: 177 grams
Maka akụkụ ya, ọnụ nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB-C na-eche ihu ala, nke na-esote nke anyị ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri fọrọ nke nta ka ọ kwụsị Ogwe 3,5mm nke a na-enwekarị ekele n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ekweisi nwere waya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nzuzo na ngwaọrụ enweghị aptX. Akụkụ akụkụ ahụ zuru oke na n'akụkụ aka nri bụ ebe olu olu na bọtịnụ ike ga-adị. Ọnụ ya dabara nke ọma na aka ya n'agbanyeghị na n'ụdị ojii ya (anyị nwere ọcha na-egbu maramara ma na-egbuke egbuke) o nwere nnukwu nsogbu na njide mkpịsị aka. Otú ọ dị, a na-etinye mkpuchi ahụ na ngwugwu.
Banyere obi nke ngwaọrụ ahụ, oge a Realme kpebiri ịkụ nzọ MediaTek, G95 a ma ama ufọt ufọt nso esonyere atọ na ebe nchekwa na nsụgharị Ram nke 4, 6 na ruo 8GB, Ike kachasị dị na ya bụ kpọmkwem ihe anyị nyochara maka izu abụọ. Maka nke ya naanị nchekwa nke Realme 8 bụ 128GB, ihe anyị chọtara karịa, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ nweghị ụdị faịlụ faịlụ ma ọ bụ ngwaike a kapịrị ọnụ nke na-eme ka arụmọrụ nke ọgụgụ na odide dị mma.
Anyị na-achọta nkọwa ole na ole na-adọrọ adọrọ, nzọ na WiFi 6 na 4G LTE na ọkwa nke njikọta ikuku, nke nyere anyị ezigbo arụmọrụ na netwọkụ 5GHz dịka ị hụrụ na vidiyo. Bluetooth 5.0 maka ihe ndi ozo. Ihe niile a ga-aga n'okpuru Realme UI 2.0, oyi akwa nke na-abịa n'elu gam akporo 11 na nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Na akwukwo, dika anyi huworo, Realme a enweghi ihe otutu, obu ezie na o doro anya na ya na AMOLED panel, ulo oru a ekpebiela uzo na Na-akara mkpisiaka na-agụ nke na-arụ ọrụ nke ọma na-atụle ọnụọgụ ego.
Nnwere onwe na Realme UI 2.0
Anyị na-amalite na nnukwu, ya batrị, anyị nwere 5.000 mAh na ụgwọ “ọsịsọ” karịrị naanị otu awa. Ihe ngwugwu a bu chaja 30W na eriri USB-C, ma anyị agaghị enwe ekweisi n'agbanyeghị na anyị nwere Jack 3,5mm. Ọ na-enweghị, n'ihi ihe doro anya, ikuku na-akwụ ụgwọ, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-echefughi n'ọtụtụ n'ime ọdụ ndị a, yana mgbawa NFC. Batrị ahụ na-enye anyị ihe karịrị otu ụbọchị iji ihe eji eme ihe, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnwe ntakịrị ọkụ na egwuregwu vidiyo.
Realme UI 2.0 ahapụla ụtọ ihe ụtọ n'ọnụ m, N'oge ahụ, Realme bịarutere Spain na nhicha nke sistemụ arụmọrụ ya site na ọkọlọtọ na ọ bụ otú ọ dị. Mgbe na larịị imewe Realme UI 2.0 na-eche agile na mara mma na ya pastel-aj u na ewepụghị aghụghọ, ahụmahụ na-kpam kpam merụrụ ahụ na a usoro nke "bloatware" n'ụdị zoro ụzọ mkpirisi n'ụdị ngwa, ọtụtụ ndị ọzọ na anyị adịghị Mara. gịnị kpatara arụnyere dị ka Facebook ma ọ bụ Tiktok.
Multimedia ahụmahụ na igwefoto ule
Anyị na-achọ iji nraranye nyochaa ngalaba a. Anyị na-amalite site na panel nke 6,4 nke anụ ọhịa na Super AMOLED teknụzụ presumally mere site Samsung. N'ime ya anyị ga-ahụ nchapụta kachasị nke Nri 1000, ezu maka agha n'èzí. Ihuenyo bụ nnọọ ihe ama ama na ewepụghị imewe, Otú ọ dị, anyị nwere freckle na elu aka ekpe na a ala etiti na m na-adịghị nnọọ aghọta ma ọ bụrụ na anyị na-echebara igwefoto agbakwunyere na elu ebe. Banyere ụda, Anyị nwere otu ọkà okwu na ala nke edobere nke ọma ma na-enye ụda dị ike ma doo anya, na-ejikọ ọdịiche dị na njedebe dị elu maka ebumnuche doro anya.
Igwefoto bụ ebe anyị na-amalite ịmalite ịchọta ọnyà mbụ, anyị nwere ihe mmetụta anọ, otu n'ime 64 MP bụ isi nke na-enye anyị ntinye vidiyo na-atọ ụtọ. Ọ na-ata ahụhụ dị iche ma na-emegbu HDR mgbe anyị setịpụrụ ya na akpaghị aka. Anyị na-aga n'ihu na igwefoto 8 MP raara nye Ultra Wide Angle, yana ihe mmetụta abụọ, otu nke 2MP macro na nke ọzọ nke 2MP ahaziri na oji na ọcha iji meziwanye, na tiori, foto na ọnọdụ eserese. Na vidiyo anyị ị nwere ike ịhụ arụmọrụ nke igwefoto ahụ kpọmkwem, ka ọ dị ugbu a, anyị ga-ahapụrụ gị ihe nlele foto na ala.
Nke ahụ kwuru, ka anyị jiri ike nke a Realme 8, nke mbụ bụ ọnụahịa ya, euro 199 bụ nke gọọmentị, ọ bụ ezie na enwere ike ịkwalite ya site na ntinye mmalite. Ihe na-esote bụ nnukwu ihe ngosi 6,4-inch nke Super AMOLED, nke dabara nke ọma yana ihe na-enwu gbaa. Nnwere onwe kwa ọkọlọtọ ga-emekwa ka iji ngwaọrụ ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ngwa ngwa ngwa ngwa ya nwere ike ọ gaghị eyi ngwa ngwa.
Maka akụkụ ya, ụzọ ha si jikọta Realme UI 2.0 ahapụwo anyị ụtọ uto, yana oke mmetụta plastik nke ọnụ. O doro anya na anyị enweghị eriri ikuku ma ọ bụ NFC, ihe nghọta na ọnụahịa ya.
8 bu eziokwu
Ezi Super AMOLED ihuenyo
Ọtụtụ mgbe na-ekpo ọkụ
Igwefoto mara mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme 8: standardkpụrụ ọhụrụ nke bara uru maka ego
Adobe Zii: Kedu ihe ọ bụ na gịnị ka eji ya?